Nadaafad Soo-saareyaasha Qaybta Qabashada Hawada Nadiifinta - Shiinaha Warshad & Shirkado Qeyb Hawleed Nadiif ah
Qaybaha Qabashada Hawada ee Biyaha
Qaybta hagidda hawadu waxay ka garab shaqaysaa qaboojinta iyo munaaradaha qaboojinta si ay u wareejiso una ilaaliso hawada iyada oo loo marayo habka kululaynta, hawo-qaadashada, iyo qaboojinta ama qaboojinta. Maamulaha hawada ee cutub ganacsi waa sanduuq weyn oo ka kooban kuleylka iyo qaboojinta gariiradda, afuufa, raajooyin, qolal, iyo qaybo kale oo ka caawiya hawo-hayaha shaqadiisa. Maamulaha hawadu wuxuu kuxiranyahay marinka marinka hawaduna waxay ka soo gudubtaa qaybta maareynta hawada ilaa marinka marinka, ka dibna ...
Noocyada Qoyaxa Nooca Hawlaha Qabashada Hawada Waxtarka sare iyo isku halaynta: Gebi ahaanba iskiis u kooban ee ku jira bir bir ah oo adag oo aan laba jibaar lahayn construction CNC oo lagu farsameeyay dahaadhka darajada warshadaha, maqaarka dibedda ee loo yaqaan 'MS powder coated', maqaarka gudaha ee GI .. codsiyada gaarka ah sida cuntada iyo dawooyinka, maqaarka gudaha wuxuu noqon karaa SS. Awoodda ka-qaadista qoyaanka. Fasalka EU-3 wuxuu sifeeyaa shaandhooyin ciriiri ah oo qaadaya Hawada. Xulasho badan oo ah isha kuleylka dib-u-dhaqaajinta: -kulladaha, uumiga, hargabka kuleylka ...